Usihlalo weBhodi yoKhenketho yase-Afrika kunye nee-Ambassadors ngoku eziTyelelayo eMantla eTanzania
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika » Usihlalo weBhodi yoKhenketho yase-Afrika kunye nee-Ambassadors ngoku eziTyelelayo eMantla eTanzania
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Iindaba zaseTanzania eziziiNdaba • Tourism • Iindaba zeWired Travel
Usihlalo weBhodi yoKhenketho yase-Afrika kunye nee-Ambassadors kukhenketho eTanzania.
Usihlalo weBhodi yezoKhenketho ye-Afrika, uMnu Cuthbert Ncube, wayehamba neqela labameli be-ATB kukhenketho lokuziqhelanisa noMntla weTanzania emva kokuqinisa umboniso wezokhenketho wengingqi ye-First East African izolo, ngoMvulo we-11 ku-Okthobha ka-2021.
Ukhenketho luqale emazantsi eMount Meru kwingingqi yeArusha.
Iqela labo emva koko lenza utyelelo ngembeko kwiNkqubo yeTyelelo yeNkcubeko yeTengeru enikezelwe kulondolozo lwendalo kwiNtaba iMeru.
Usihlalo we-ATB kunye neqela lakhe baya kutyelela iindawo ezithile zommandla weKilimanjaro emazantsi eNtaba iKilimanjaro ngexesha lokhenketho lwabo oluqhubekayo.
The IBhodi yezoKhenketho ye-Afrika (i-ATB) Usihlalo kunye neqela lakhe loonozakuzaku baqalise ukhenketho lwabo namhlanje emazantsi eNtaba iMeru kwingingqi ye-Arusha kutyelelo lwembeko kwiNkqubo yezoKhenketho yeNkcubeko yaseTengeru, iziko elisekwe ukuze liququzelele kwaye libonelele ngokhenketho lwenkcubeko.
Inkqubo yoKhenketho lweNkcubeko yeTengeru ikwanikezelwe kulondolozo lwendalo kumathambeka eNtaba iMeru, eyona ndawo iphakamileyo yesibini eTanzania. Le nkqubo inikezelwe ekutsaleni abakhenkethi basekhaya nabangaphandle abanomdla wokuchitha iiholide zabo kunye noluntu lwengingqi kwaye bazinikele ngokuzithandela ekwenzeni igalelo kuphuhliso lweeprojekthi ezahlukeneyo zentlalo nezoqoqosho ezixhamlisa abantu bendawo.
Ibekwe phakathi kweNtaba iMeru kunye neNtaba iKilimanjaro, iPaki yeSizwe yase-Arusha yenye indawo etsala abakhenkethi, ebandakanya abathathi-nxaxheba kwinkomfa emva kwendibano yabo kwisixeko sase-Arusha. Ifumaneka phakathi kwe2 ekhuphisanayo kwaye ijonge ezona ntaba ziphakamileyo eMantla eTanzania, iPaki yeSizwe i-Arusha ibonelela ngokubaleka ngokukhawuleza kwabantu abafuna ukuphumla ngempelaveki, ubukhulu becala bevela kwiidolophu ezixakekileyo ezinje ngeArusha neMoshi eMantla eTanzania.
Ipaki ilawulwa kakhulu yiNtaba iMeru, ezikwi-4,566 yeemitha (14,980 iinyawo), yeyona ntaba yesibini iphakamileyo eTanzania. Ipaki ijonge amathafa asentshona Kilimanjaro kumathambeka eNtaba iMeru ebonelela ngohambo lokuhamba ikakhulu kubakhenkethi abasuka eTanzania, eMpuma Afrika nakwezinye iindawo zehlabathi. Laziwa kakhulu ngamachibi ayi-7, amachibi eMomella ngaphakathi kwemida yawo, kunye nenani elikhulu leenyathi ezindala xa kuthelekiswa nezinye iipaki eTanzania.
Igqunywe kwinxalenye enkulu yosuku, iNtaba iKilimanjaro, eyona ntaba inde eAfrika, yahlukile Indawo yabakhenkethi baseTanzania, kutsala malunga nama-60,000 abakhweli nyaka ngamnye. INtaba imele umfanekiso weAfrika jikelele, kwaye ingqokelela yayo emide, ehlanganiswe ngekhephu iyahambelana neAfrika.
Kumazwe aphesheya, umceli mngeni wokufunda, ukuphonononga, kunye nokunyuka le ntaba ingaqondakaliyo kubambe umbono wabantu kwihlabathi liphela. Kude kube namhlanje, iNtaba i-Kilimanjaro ibiluphawu lwemisebenzi eyahlukeneyo yesizwe neyamazwe aphesheya, amashishini, kwanopolitiko. Iinkampani zeshishini kunye neeklabhu ezahlukeneyo zentlalo zinobhaliso olunamagama eNtaba iKilimanjaro ukubonisa ubukho bazo obubalaseleyo.
Ngo-1961, iflegi yeTanzania esandula ukuzimela yathwalwa yanyuselwa entabeni ukuze ibhabhe phezulu, kwaye isibane senkululeko sasikhanyiselwe encotsheni yokuvuselela iphulo lezopolitiko lomanyano, inkululeko kunye nobuzalwana.
INtaba i-Kilimanjaro ihlala iluphawu kunye neqhayiya le-Afrika ngokugqama kwayo kwezokhenketho. Le ntaba iphakamileyo e-Afrika idweliswe kwiindawo ezingama-28 zabakhenkethi ehlabathini ukonwabela ubomi babo bonke.
URachel Elisante Kingu uthi:
Oktobha 13, 2021 kwi-11: 26